सामूहिक फूलखेती - BirtaJyoti
super userOctober 26, 2019 4:39 am 0
झापा । दमक नगरपालिका–३ की बन्दना पोखरेललाई सामूहिक खेतीको सयपत्री कसरी बेच्ने भन्ने चिन्ता थियो । यस वर्ष तिहार नआई भदौदेखि नै ढकमक्क सयपत्री फूल्यो। त्यसैले कुनै व्यवसायीलाई बारीनै ठेक्का दिने योजना पनि बन्यो । तर, जब भदौ दोस्रो सातादेखि विभिन्न सहकारी एवं अन्य संघसंस्थाका साधारणसभा हुन थाले, फूल बिक्रीको चिन्ता हट्यो। फूलको माग गर्नेहरु बारीमै पुग्न थाले । गोलाटार बस्तीमा महिलाहरुले गरेको सामूहिक सयपत्री खेतीले अहिले पनि बारी ढकमक्क छ ।
फूल खरिदका लागि मात्रै होइन, अवलोकन गर्न र फोटा खिचाउनकै लागि पनि दिनहुँ विभिन्न टोली बारीमा पुग्छन् । अन्य उपज तयार गरे पनि बिक्रीका लागि समस्या हुने गर्छ । तर, फूल खेतीमा यो समस्या छैन । फूल खरिदका लागि टेलिफोनबाटै माग आउँछ, किन्ने पनि बारीमै पुग्छन् । गत वर्षदेखि दमक–३ मा महिलाहरुले सामूहिक फूल खेती गरेका हुन् । तिहारका बेला अधिक खपत हुने गरेको सयपत्री फूलको माग बढी रहेकाले यसको व्यवसायीक उत्पादनमा समूहनै बनाएर लागिपरेको उनीहरु बताउँछन् । यस वर्ष भने तिहारभन्दा केही अघिनै बिक्रीका लागि तयार भएको समूहकी अध्यक्ष विष्णु खड्का बरालले बताइन्।
तिहारअघि तयार भएको फूल विभिन्न सहकारी तथा अन्य संघ संस्थाको साधारणसभा, वार्षिकोत्सवलगायतका कार्यक्रममा खपत भएको उनले बताइन्। पहिलो वर्ष सो फूल खेतीका लागि दमक नगरपालिकाले उनीहरुलाई सहयोग गरेको थियो । पहिलो वर्षकै उत्पादनबाट उत्साहित भएकाले यस वर्ष समेत खेतीलाई निरन्तरता दिइएको समूहकी उपाध्यक्ष बन्दना पोखरेलले बताइन् । भारतीय फूल तथा मालासँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने भए पनि नेपाली फूल र मालाको धेरैबाट माग भइरहेको उनको भनाइ छ । महिलाहरुले उत्पादन गरेको सयपत्री फूल हाल प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँका दरले बिक्री भई रहेको समूहकी सदस्य देउमाया बोहोराले जनाइन् । माग अधिक भएकाले बिक्रीका लागि समस्या नपरेको उनको अनुभव छ ।
पहिलो वर्षको उत्पादनबाट हौसिएका महिलाहरुले यस वर्ष खेतीलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेका छन् । गत वर्षभन्दा व्यवसायीक र व्यवस्थित बनाउने प्रयासले प्लाष्टिक ओछ्याई मल्चिङ् विधि अपनाएर बिरुवा रोपेका थिए । जसका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही लागत समेत बढेको उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ । तर, यस वर्ष वर्षायाममा अधिक पानी परेका कारण विरुवानै डुबानमा परेको थियो । जसका कारण अपेक्षित उत्पादन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
परिवारको साथ, अन्यको सहयोग
सात कट्ठा क्षेत्रफलमा गरिएको फूलखेतीमा स्थानीय मानसरोवार कृषि सहकारी संस्थाले प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । महिलाहरुमा देखिएको उत्साहलाई व्यावसायिक रुपमा बदल्न प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको संस्थाका वातावरण उपसमिति संयोजक हेमराज पोखरेलले बताए ।
खेती गर्ने क्रममा केही प्राविधिक समस्या समेत हुने गरेकाले उत्पादनमा समस्या देखिएको उनले बताए। दिनभरि घरैमा हुने महिलाहरु व्यावसायिक फूल उत्पादनमा लागेपछि परिवार पनि दंग छन् । फूलको स्याहार गर्दै गरेका अवस्थामा भेटिएका डिल्लीराम पौडेलले महिलाहरुको उत्साहले अरु धेरैलाई प्रेरणा दिएको बताए । बुहारी लक्ष्मी फूल खेती समूहमा आवद्ध भए पनि उनले नभ्याउँदा परिवारका अन्य सदस्यले पनि खेतीमा सघाउने गरेको पौडेलले बताए। थाहाखबरबाट
CATEGORIES मेन स्टोरी
झापामा धानको बिउ ब्याडमै सुक्न थालेपछि किसान चिन्तित
super user- June 15, 2020
झापा । झापाका किसान यतिबेला धानको ब्याड नै सुक्न थालेपछि थप समस्यामा परेका छन्। चैते धानमा दाना नलाग्ने, बाला तथा बोट सुृक्ने र फौजी किराको ... Read More
जेलमा शोभराज–गोरेको चेस, छुटे ३२९ कैदी
super user- February 19, 2020
काठमाडौं । कारागार, विभिन्न अभियोगमा कैद सजाय तोकिएकाहरुलाई राख्ने गृह । कानुन विपरीतका विभिन्न कार्यमा सक्रिय तथा संलग्न अभियोगमा कैद सजाय पाएकालाई आचरण सुधार्ने उदेश्यले कारागार ... Read More
प्रभु साहले किन दिए राजीनामा ?
super user- August 20, 2019
प्रविण टिबडेवाल रौतहट । नेकपा प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष प्रभु साहले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका साहले स्थायी कमिटीमा आफ्नो नाम नपरेपछि ... Read More
NEWER POSTआँखा रोगको बारेमा जनचेतना बढाउन आवश्यक छ : डा मोनिका कर्माचार्य, मेची दिब्यज्योति आँखा अस्पताल
OLDER POSTतिहार विशेष : पशुपक्षीलाई एक दिनको पूजा र माला !
झापामा सरकारी सवारीसाधनको यसरी हुदैँ दुरुपयोग
ताप्लेजुङको कोसेली छुर्पी पाउनै गाह्रो
दुबै मृगौला फेल भएका ललितलाई बचाउन साझाले अभियान चलाउने
५ बिशेषता बोकेको बिर्तामोडको बजेट (नीति तथा कार्यक्रमसहित…)
अर्जुनधाराको विकासमुखी नीति
मेन स्टोरी (267)
स्थानीय समाचार (147)
देखेको कुरा (20)
सम्पादकः तीर्थ सिग्देल